Showing posts sorted by relevance for query thit htoo lwin. Sort by date Show all posts
10/19/2013 03:20:00 PM crime-news
10/15/2013 11:42:00 AM Myanmar-news
1/30/2014 01:35:00 PM crime-news
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဒူချီရာတန်းမီးလောင်မှုဟာ ရဲတွေကလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့
1/30/2014 08:50:00 AM crime-news
ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၊ မောင်းတောမြို့နယ်၊
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရွှေမောင်းက စွပ်စွဲ
ဒီရဲက ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အတွက် အပြင်လူဝင်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး၊
အပြင်လူဝင်ပြီးမှ ရှို့တယ်ဆိုရင်လည်း ဒါကိုရဲကမိမှာပဲ၊
ဒါတစ်ချက်၊ နောက်တစ်ချက်က အဲဒီအနီးပါတ်ဝန်းကျင်ကရွာတွေက လူတွေက ကျွန်တော့ကို တယ်လီဖုန်းဖြင့် သေချာခိုင်မာတိကျစွာ သတင်းပို့တာကတော့ အဲဒီရဲတွေ ကိုယ်တိုင်မီးရှို့ခဲ့တာ သူတို့မြင်တယ်တဲ့။
ဒါက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲရှိလို့ တိုက်ဆိုင်ပြီးမှ လုပ်တယ်လို့ သုံးသပ်မလား၊ သို့မဟုတ် ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာကိုလဲ သုံးသပ်ပြီးမှ ဒါက ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ လုံခြုံရေးယူထားတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ၊ သူတို့ကိုယ်တိုင် မရှို့ရင်တောင်မှ သူတို့ရဲ့ ပေါ့ဆမှု၊ သူတို့ရဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ အခြားရွာအပြင်ကနေ လာတဲ့သူ ကိုလဲ မသိသလို နေပြီးတော့ ဒါကိုမီးရှို့မှုတွေဖြစ်သွားပြီးတော့ ပြသနာကို ရှုပ်သထက်ရှုပ်အောင် ဒါကိုဖန်တီးတာပဲလို့ ကျွန်တော်အဲလိုပဲ ပြောချင်တယ်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရွှေမောင်း၏ DVB News အင်တာဗျူးမှ ဖြေကြားချက်မှ ကောက်နှုတ်ဖေါ်ပြပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်၊ ဒုချီရာတန်းမီးလောင်မှု ဘင်္ဂလီများ၏ကာက်ကျစ်မှုများပေါ်ပြီ
1/29/2014 06:00:00 PM crime-news Myanmar-news
28.1.2014 ရက်နေ့ ညနေ ဒုချီးရားတန်းမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားမှုမှာ မတော်တဆ လောင်ကျွမ်းမှုမဟုတ်ဘဲ ကျေးရွာနေ ဘင်္ဂလီကုလားများမှ အကွက်ကျကျစီစဉ်ပြီး သူတို့ကိုယ်တိုင် မီးရှို့မှုဖြစ်ကြောင်း၊
သူတို့အိမ်ခေါင် မိုးများပေါ်တွင် ဓါတ်ဆီစိမ် ကောက်ရိုးလိပ်များနှင့် ဖျာလိပ်များအား စီတန်းထားသည်တွေ့ရှိရကြောင်း၊ မီးမ လောင်ဘဲ ကျန်ရစ်ခဲ့သော အိမ်တချို့၏ ပုံများမှ သက်သေခံလျှက်ရှိသည်။
မနက်ဖန် ရောက်ရှိလာကြမည့် EU အဖွဲ့များထံတွင် သူတို့ရဲ့ တဲကုတ်သာသာရှိသော နေအိမ်များအား မီးရှို့ပြီး နေအိမ် အသစ်တောင်းမယ်ဆို တဲ့သဘောကို ဆောင်နေပါကြောင်း
မုဒိန်းကျင့်ရန် ခံခဲ့ရသော စတုတ္ထတန်း ကျောင်းသူ မအိအိငြိမ်းနှင့် ရဲစခန်းမှုး
1/17/2014 03:30:00 PM crime-news
“ရဲစခန်းမှုး ဦးလှစိုးက မှန်တာမပြောလျှင် ထောင်ချပြစ်မည်ဟု ပြောဆို စစ်ဆေးမှုကို ခံရရှာသော စတုတ္ထတန်းကျောင်းသူ မအိအိငြိမ်း “
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး၊ ယင်းမာပင်ခရိုင် ၊ ပုလဲမြို့နယ် ၊မရိုးတုန်းကျေးရွာ အခြေခံမှုလ တန်းလွန်ကျောင်း က ဆရာ၊ ဆရာမများသည် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင်နှစ် စတုတ္ထတန်း အတန်းတင်စာမေးပွဲသည် မြို့နယ်စစ် စာမေးပွဲ ဖြစ်သည်အလျှောက် ပညာရေး တိုးတက်စေခြင်းငှာ ရည်ရွယ်၍ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများကို အနီးကပ်ကြီးကြပ်နိုင်ရန် စာသင်ကျောင်းသို့ ညအိပ် ခေါ်ယူ စာကြည့် စေခဲ့ပါသည်။
အချိန်ကာလ အားဖြင့်လည်း (၁)လ ခန့် ကြာမြင့်ခဲပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၂၄.၁၂.၂၀၁၃ နေ့ ည အချိန်မတော်တွင် ယာယီကျောင်းအုပ် ဆရာဦးမျိုးနိုင်ထွန်း က စတုတ္ထတန်းကျောင်းသူ မအိအိငြိမ်း၏ အိပ်ယာသို့ ၀င်ရောက်ကာ မအိအိငြိမ်းအား ရင်သားများကို ဆွဲကိုင် ပြီး တကိုယ်လုံးကို ပွေ့ဖက် နမ်းရှိုက်၍ ၊ လုံချည်ကို ချွတ်ကာ ကာမ ဆက်ဆံရန် ကျိုးစားခြင်းကို ခံခဲ့ရပါသည်။
ထိုဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ၇.၁.၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် မိဘအုပ်ထိန်း သူများနှင့် တကွ ၊စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး၊ ယင်းမာပင်ခရိုင်၊ ပုလဲမြို့နယ် ၊ချစ်ပြစ်ရဲစခန်းသို့ သွားရောက် တိုင်ကြား စစ်ဆေးခံခဲ့ပါသည်။
” ထိုသို့စစ်ဆေးရာတွင် ရဲစခန်းမှုး ဦးလှစိုး ဆိုသူနှင့် ကျွန်မ တစ်ဦးတည်း အခန်းကျဉ်းလေးထဲသို့ ခေါ်ယူပြီး အချိန်(၂) နာရီခန့် ကြာ အစစ်ဆေး ခံခဲ့ ရပါသည်။ အစစ်ဆေးခံနေစဉ် တွင် ရဲစခန်းမှုးဆိုသူမှ ကျွန်မအား
အမှန်ကို ပြောလျှင် ပြော ၊ မမှန်တာကိုပြောလျှင် ထောင်ချပြစ်မည်ဟု ပြောဆိုစစ်ဆေး ခံခဲ့ ရပါသည်။” ..
ဟု စတုတ္ထတန်း ကျောင်းသူလေး မအိအိငြိမ်းမှ ပြန်လည် ပြောပြပါသည်။
ဤကဲ့သို့ အသက်အရွယ်မပြည့်သေးသော ကလေးသူငယ် မိန်းကလေး တစ်ဦးတည်းနှင့် အမှုစစ်အရာရှိ နှစ်ကိုယ်တည်း ခေါ်ယူ စစ်ဆေးခြင်းသည် ရဲလုပ်ထုံး၊ လုပ်နည်းများ ကိုက်ညီခြင်း ရှိမရှိနှင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး အတွက် လည်း မေးခွန်းထုတ်စရာများ ဖြစ်လာပါသည်။
လာရောက်တိုင်ကြားသော မိဘ အုပ်ထိန်းသူနှင့် ကလေးမလေး ကိုလည်း ပျူပျူငှာငှာ ဆက်ဆံ ခြင်း မခံရသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။ တရားလိုကို အဘယ့်ကြောင့် တစ်ဘက်သတ် ပြုမှုပြောဆို ဆက်ဆံရသလဲ ဆိုတာကိုတော့ စခန်းမှုး ဦးလှစိုး ဆိုသူသည် သာ အသိဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
1/17/2014 11:50:00 AM crime-news
ဘာအံမြို့မှမြ၀တီသို့ထွက်ခွာလာသော ယာဉ်မောင်းလှမြင့် (အသက်၊ လိပ်စာ၊ စုံစမ်းဆဲ) မောင်းနှင်လာသော ၁၂ ဘီးယာဉ် ၉ခ/------သည်ဇန်န၀ါရီ ၁၂ ရက် ညနေ ၅ နာရီ ခန့်က ကော့ကရိတ်မြို့နယ် အောင်မင်္ဂလာလမ်းအရောက်တွင် ပြည့်စုံလမ်းမှ
ထွက်လာသော ဆိုင်ကယ်ကိုရှောင်ရာ ဆိုင်ကယ်နောက်မှ စီးလာသောဒေါ်လုံးတင်အား နောက်ဘီးဖြင့် ချိတ်မိသဖြင့် ၀ဲခြေကျိုး၊ ယာဒူးခေါင်းပေါက်ပြဲ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှလာသော ငွေရ (၂၃) နှစ်နှင့် ဖိုးသာထူး (၃၂) နှစ်တို့ စီးနင်းလာသောဆိုင်ကယ်ကို ၀ဲဘက်ယာဉ်ကြောသို့ ၀င်ရောက်တိုက်မိသဖြင့် ၁၂ ဘီးယာဉ် ဘန်ဘာချိုင့်၊ ရှေ့မီးကွဲ ပြီး ဆိုင်ကယ်နှင့်လူနှစ်ဦးမှာ ကားနောက်ဝဲဘက် ဘီးလေးဘီးကြားတွင် ကြိတ်မိ၊ ညပ်မိပြီးနေရာတွင် သေဆုံးခဲ့သည်။
ယာဉ်မောင်း လှမြင့်နှင့် ယာဉ်နောက်လိုက်တို့မှာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားကြောင်း သိရသည်။
1/13/2014 06:16:00 PM Myanmar-news
1/13/2014 06:12:00 PM Myanmar-news
မိတ်​​ဆွေများနှင့်​ အနှပညာကို ချစ်​မြတ်​နိုးသူများ ခင်​ဗျာ
လွန်​ခဲ့​သော နှစ်​ပတ်​ခန့်​က ဆိုးရွားလှ​သောမီးဟာ ကျွန်​​တော့်​ ဇာတိ ရွာ​လေးဖြစ်​တဲ့ ကန်​ဘက်​​ကျေးရွာကို ရက်​စက်​စွာဝါးမြို သွားခဲ့ပါပြီ။ အိ်​မ်​နှင့်​ဆိုင်​ခန်း​ပေါင်း ၂၃၀​ကျော်​ မီး​လောင်​ ပျက်​စီး ဆုံးခဲ့ရပြီး လူများစွာ အိုးမဲ့အိ်​မ်​မဲ့ဖြစ်​ခဲ့ရပါတယ်​။
ထိုမီး​ဘေးသင့်​ ပြည်​သူများအား ကိုယ်​တတ်​နိုင်​ သ​လောက်​ ကူညီနိုင်​ရန်​ ဒီပြပွဲ​လေးကို လုပ်​ဖြစ်​ရခြင်းဖြစ်​ပါတယ်​။
ပြပွဲတွင်ကျွန်တော် ခင်ဇော်လတ် ​၏ ပန်းချီကား​ပေါင်း၂၀ပြသ​ ရောင်းချမှာဖြစ်​ပြီး ​ရောင်း၍ ရရှိ​သော​ငွေအားလုံးက်ို မီး​ဘေးသင့်​ ပြည်​သူများ ပြန်​လည်​ ထူ​ထောင်​​ရေးအတွက်​ လှူဒါန်းသွားမှာ ဖြစ်​ပါတယ်​။
ပန်းချီကား​ဈေးနှုန်းကိုလည်း လက်​ရှိပန်းချီကား​ဈေးနှုန်းထက်​ များစွာ​လျော့ချကာ​ရောင်း​ပေးသွားမှာဖြစ်​ပါတယ်​။
ထိုပန်းချီကားများထဲမှ ကျွန်​​တော်​ကြိုက်​ဆုံးဖြစ်​တဲ့ ၄ကားတွဲ ပန်းချီကားတစ်​ကားကို​တော့ ​ဈေးအများ ဆုံးပေးသောသူ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင် နိုင်မည့် လေလံ(Auction)ပုံစံ​လေးနဲ့​ ရောင်း​ပေး သွားမှာပါ။
ယခု ဖိတ်​စာ​ ဝေ​နေချိန်​မှာ ပန်းချီကား တချို့ကို စတင်​​ရောင်းချ ရပြီးပါပြီ။
ပြပွဲအမည်​ ` Givingahand´ fund raising
ပန်းချီဆရာအမည်​ ခင်​​ဇော်​လတ်​(Khin Zaw Latt)
ဖွင့်​ပွဲအချိန်​ 17th. JAN. 2014 5:00-8:00 PM
ပြသမည့်​ရက်​ 17th. JAN - 21st. JAN
​နေရာ KZL ART GALLERY
အမှတ်​ ၁၈၄/၈၄(က)၊ ​ရွေ​တောင်းကုန်းရိပ်သာ​၊ သံလွင်​လမ်း၊ ​ရွှေ​တောင်​ကြား(၂) ရပ်​ကွက်​၊ ဗဟန်း,
ဖုန်း 01 2304105, 095156571
ခင်​​ဇော်​လတ်​(Khin Zaw Latt)
12/14/2013 07:09:00 PM crime-news
12/14/2013 07:07:00 PM crime-news
12/14/2013 10:47:00 AM crime-news
(၁၃.၁၂.၁၃)ရက်နေ့(၀၈၀၀)အချိန်တွင် တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီး ၊ တနင်္သာရီမြို့၊ သိန်ခွန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြိမ်ချောင်းကျေးရွာ၏ အ ရှေ့မြောက်ဘက်(၇)မိုင် ခန့်အကွာ ဒေသအ ခေါ် လိပ်ကိုက်ချောင်းရှိ NTT သစ်ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ကွက်တွင် ဆင်ဦးစီး ဦးသာထွေးနှင့် ဆင်နောက်လိုက် အောင်ပို တို့သည် ဖိုးမန်း အမည် ရှိဆင် ထီး၏အနီးတွင်သစ်ဆွဲရန် အတွက်သစ်လုံးများ နဖားဖေါက်နေကြရာမှ ဆင်နောက်လိုက် အောင် ပို(၁၈)နှစ်(ဘ)ဦးသားအို ရှမ်းအင်းတော်ရွာ၊ တနင်္သာရီမြို့နေသူမှဆင် နားသို့ကပ်သွားပြီး ဆင် အားတက်စီးစဉ်ဆင်ပေါ်သို့ အတက်မခံဘဲ နှာမှောင်းဖြင့် တွန်းလှဲပြီး ခြေဖြင့်တက်နင်းခဲ့ရာ အောင်ပို ၏ ရင် ဘတ်နှင့်ဘယ်ဘက်ပေါင် တို့ဒဏ် ရာများရရှိပြီး သေဆုံးခဲ့ပါသည်။ ၄င်းဖြစ်စဉ်ကို တနင်္သာရီမြို့မ ရဲစခန်း မှ သေမှုသေခင်းဖွင့်လှစ် စစ်ဆေးလျက် ရှိကြောင်း Myanmar News Now မှ သတင်းရရှိပါသည်။
12/12/2013 12:33:00 PM Myanmar-news
ဦးဝင်းချို နှင့် အပေါင်းအပါ (၆)ဦးထဲမှ (၅)ဦး ကျင့်(၄၀၁)ဖြင့် ထောင်မှပြန်လွှတ်
12/11/2013 02:48:00 PM political-news
ယနေ့ ဦးဝင်းချို နှင့် အပေါင်းအပါ (၆)ဦးထဲမှ (၅)ဦး ကျင့်(၄၀၁)ဖြင့် ထောင်မှပြန်လွှတ် ၊ ဓါတ်ပုံ - ကိုသန့် ဇင်
ပဲခူးမြို့တွင် နိုင်ငံသားအရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့သူ ဦးဝင်ချို နှင့် အပေါင်းအပါ(၆)ဦးအား (၂၉.၁၁.၂၀၁၃)နေ့ တွင် ပဲခူးမြို့နယ် တရားရုံး၌ မြို့နယ် တရားသူကြီး ဦးကျော်စိုးမှ ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ)အမှုအတွက်သာ တစ်ဦးလျှင် ထောင်ဒဏ်(၆)လစီ ကျခံစေရန် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ ပါသည်။
၄င်းတို့(၆)ဦး အမှု ရင်ဆိုင် နေစဉ်ကာလအတွင်း ချုပ်ရက် ပေါင်း(၉၀)ရက် ရရှိထားပြီ ဖြစ်သည်။
(၁၁.၁၂.၂၀၁၃)နေ့ နံနက်(၁၁း၀၀)အချိန်တွင် သမ္မတ၏ လွတ်ငြိမ်ချမ်းသာခွင့် အမိန့် နှင့် ဦးဝင်းချို၊ လေးနိုင်ဦး၊ ဘုံဘုံ၊ ဟန်လင်းအောင်နှင့် ထိန်လင်းတို့အား ကျင့်(၄၀၁)ဖြင့် ပဲခူးအကျဉ်းထောင်မှ ပြန်လည်လွှတ်မြောက်လာပြီ ဖြစ်သည်။
သို့ သော် ကိုရန်ပိုင်စိုးမှာ ခြံမြေကိစ္စ ပုဒ်မ ၄၄၃ဖြင့် တရားဆွဲဆို ထားသောကြောင့်(၁၃.၁၂.၂၀၁၃)နေ့တွင် အာမခံရ၍ လွှတ်မြောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ ရုံး မှ သတ်မှတ်ချက်ထက် ကျော်လွန်နေတဲ့ ပုသိမ်ဆေးရုံးကြီးမှ ရုံးချိန် သတ်မှတ်ချက်
12/11/2013 11:46:00 AM political-news
ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး ပုသိမ်မြို့ အထွေထွေ ရောဂါကု ဆေးရုံကြီး ဆေးရုံစီမံခန့် ခွဲ မှု ကော်မတီ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁၁/၂၀၁၃)၏ ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ချက် ၁၀ အရ ရုံးချိန်သည် နံနက်(၉း၀၀)နာရီမှ ညနေ(၅း၀၀)ထိ ဖြစ်ကြောင်း ဒီဇင်ဘာလ(၆)ရက်နေ့ တွင် ဆေးရုံးအုပ်ကြီး ဒေါက်တာခင်သန်းမွန် မှ လက်မှတ်ရေးထိုး၍ အမိန့် စာ ထုတ်ပြန် ထားပါသည်။
ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ ရုံးမှ စာအမှတ်၊ ၅/၁၅၂-၀န်ထမ်း/ အဖရ(၂၀၁၃) တွင် ဗဟိုရုံးများနှင့် ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဌာနများ အနေဖြင့် ၀န်ထမ်းများ သက်သာ ချောင်ချိစွာဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင် နိုင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ချက်မှတ်ထားသည့် လမ်းညွှန်ချက်များတွင် သတ်မှတ်ထားသော ရုံးချိန် ဖြစ်သည့် နံနက်(၀၉း၃၀)မှ ညနေ (၁၆း၃၀) အတွင်းမှာသာ တာဝန် ထမ်းဆောင်စေပြီး၊ ရုံးဆင်းချိန် အတိအကျ ပြန်လည် စေလွှတ်သွားရန် ဖော်ပြထားပါသည်။
ပုသိမ်ဆေးရုံကြီးမှ ထုတ်ပြန်ချက် အမိန့် စာနှင့် ပြည်ထောင်စု အစိုးရမှ ထုတ်ပြန်ချက် အမိန့် စာ နှစ်ခုအား အများပြည်သူ သိရှိစေရန် Myanmar News Now မှ နှိုင်းယှဉ် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
မူရင်း အမိန့် စာများအား အောက်မှာ ဆက်လက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
12/11/2013 10:23:00 AM crime-news
ပလိပ် ဒီဇင်ဘာ ၁၁
ဖြစ်စဉ်မှာ ၂၉. ၁၁.၂၀၁၃ (၂၄း၀၀) ချိန်ခန့်ကကျွန်မ(မဥမ္မရွှေ )၏ နားကပ်ကို ပလိပ်မြို့ ၀န်ထမ်းကွက်သစ်နေဒေါ်ခင်၏သမီးမှဖြုတ်ယူသွားပြီးပေါင်စား သောကြောင့်... .ပလိပ်ရဲစခန်းသို့သွားရောက်ပြီးအားကိုတကြီးတိုင်ကြားစဉ်..
စခန်းပေါက်သို့အရောက်တွင်ယခင်တပ်ရင် ၁၄တွင်အတူနေခဲ့ကျဘူးသော် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ နာမည်များကိုအော်ခေါ်မိခဲ့ပါသည် ။
ထိုကဲ့သို့အော်ခေါ်နေစဉ်တပ်ကြပ်လှထွဋ်ပါ(၄)ဦးမှဘာလို့အော်တာလည်းဟု မေးပြီး လက်ထဲကဘာတွေလည်းဟုမေးရာ ကျွန်မမှာခွေးများကိုက်မှ ကြောက်၍ကျောက်ခဲများ ကောက်လာရခြင်း ဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ရာ တပ်ကြပ်လှထွဋ်မှကျောက်ခဲတွေလွှင်ပစ်လိုက်ဟုပြောရာ ကျွန်မမှ ကျောက်ခဲ များလွှင်ပစ်ပြီးတပ်ကြပ်လှထွဋ်မှညည်းကဘာကောင်မလည်းဟုမေးပြီး ပါး ကိုရိုက်ခဲ့ပါသည်။ အဲလို့ပါးရိုက်စဉ်ကျွန်မမှရှောင်လိုက်၍မရိုက်မိပါ။ နောက်ထပ် ထပ်ပြီး ပါးမရိုက်ရန် လက်အုတ်ချီတောင်ပန်ပြီး အထတွင် တပ်ကြပ်လှထွဋ်မှ ညည်းက ဘာကောင်မလည်းဟုမေးပြီးဗိုက် သို့ခြေ ထောက်ဖြင့် အားကုန်ကန်ကျောက်၍ ယခုချိန်တွင် ပလိပ်တိုက်နယ် ဆေးရုံ တွင်ဆေးကုသမှုခံယူလျက်ရှိပါသည်။
၆.၁၂.၂၀၁၃အချိန်တွင် ပုလိပ်ရဲစခန်းသို့တိုင်ချက်ရေးဖွင့်ခဲ့ရာ ယခုချိန် ထိတပ်ကြပ်လှထွဋ်အား ဘာတစ်ခုမှအရေးယူ ခြင်း မရှိခဲ့သေးပါ။ ကျွန်မမှ လူသတ်တရာခံလည်း မဟုတ်ပါ၊ ဓါးပြလည်း မဟုတ်ပါ၊ နိုင်ငံရေး သမား လည်းမဟုတ်ပါ၊ ဖောက်ခွဲရေးသမားလည်းမဟုတ်ပါ စခန်းကိုအားကိုပြီး လာချိန်တွင် ယခုလို့နိုင်ထပ်စီးနှင်း လုပ်တာမျိုး ကြီးတော့လုပ်တာတော့ မကောင်းပါ၊ တာဝန်ရှိသူ အထက်လူကြီးများ၏ ညွန်ကြားစာများမှာ ပြည်သူလုထုနှင့် စကားပြောရာတွင်ပြေပြစ်စွာပြောဆိုရမည်ပြည်သူ၏ ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုရယူရမည်ပြည်သူချစ်သော ရဲဖြစ်အောင်လုပ်ရမည်ဟု ညွန်ကြားထားသောလည်း တပ်ကြပ်လှထွဋ်မှအထက်လူကြီးများ၏ ညွန်ကြား စာများကိုဖိဆန်နေလျက်ရှိပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍တာဝန်ရှိသူ အဆင့်ဆင့်မှ တပ်ကြပ်လှထွဋ်အား ဥပဒေအကြောင်း အရ အရေးယူ ပေးနိုင်ရန်အသိပေး အပ်ပါသည်။
ဌင်းဖြစ်ရပ်မှန် အား အချိန်မရွေး .. မဥမ္မာရွှေ အား မေးမြန်းနိုင်ပါသည်..ဖုန်း ၀၉ ၄၀၂၅၆ ၈၅၁၇။ယခုချိန်ထိ ပလိပ်တိုက်နယ်ဆေးရုံတွင် တက်ေ၇ာက်နေ ၇စဲဖြစ်ပါသည်....
by thit htoo lwin (မူရင်း ပေးစာ အတိုင်း ဖော်ပြပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။)
သီလရှင်တစ်ပါးကို ဓါးထောက်ခြိမ်းချောက်၍ လူနှစ်ဦးတို့က သားမယားပြု ကျင့်မှု ဖြစ်ပွား
12/11/2013 09:19:00 AM crime-news
ဒီဇင်ဘာ(၉)ရက်နေ့ ညနေ(၆း၃၀)နာရီ အချိန်ခန့်တွင် မကွေးမြို့ အေးမြ သာယာမြောက်ပိုင်း သစ္စာမဏ္ဍိုင် ဘုန်းကြီးကျောင်းရှေ့ လမ်းမအနီး၌ သီလရှင်တစ်ပါးကို ဓါးထောက် ခြိမ်းချောက်ပြီး လူနှစ်ဦးတို့က သားမယား ပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း Myanmar News Now မှ သတင်းရရှိသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ဒီဇင်ဘာ(၉)ရက်နေ့ ညနေ(၆း၃၀)နာရီ အချိန်ခန့်တွင် မကွေးမြို့ အေးမြသာယာမြောက်ပိုင်း သီတာရုံသီလရှင် ကျောင်းတိုက်မှ သီလရှင် မ…….(၃၇)နှစ် ၀ါတော်(၈)၀ါ၊ သာသနာ့မှတ်တမ်း မမှတ်မိ သူသည် သာယာကုန်း ရွာ ပန်းရစ်တောင် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှ ၎င်းနေထိုင်သော သီလရှင်ကျောင်းသို့ ပြန်လာစဉ် အဓမ္မပြုကျင့် ခံရခြင်း ဖြစ်သည်။
အေးမြသာ ယာမြောက်ပိုင်း သစ္စာမဏ္ဍိုင် ဘုန်းကြီးကျောင်းရှေ့ လမ်းမ အရောက်တွင် ရှေ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှ လူနှစ်ယောက်ကို တွေ့မြင်ရကြောင်း၊ တစ်ဦးမှာ အရပ်ရှည်ရှည် လက်ပျဉ်ကုန်းကုန်း(မြင်လျှင်မှတ်မိ)၊ နှင့် နောက်တစ်ဦးမှာအရပ်ပုပုက သွားခေါခေါ(မြင်လျှင်မှတ်မိ)ဟု သီလရှင်မှဆိုသည်။
၎င်းနှစ်ဦးအား သီလရှင်မှ ကြောက်၍ နောက်ပြန်လှည့်စဉ် အရပ်ရှည်ရှည် လက်ပျဉ်ကုန်းကုန်လူမှ `ပါတာပေး´ဟုပြောကြောင်း၊ သီလရှင်မှ `ဒီဆန် ထုတ်ပဲပါတယ်´ဟုပြော ရာ ၎င်းလူမှ`ရှာမရှည်နဲ့ ရှေ့ကသွား´ဟု ဆိုကြောင်း သီလရှင်မှ ပြောပြပါသည်။
ထိုအချိန်တွင် ဆိုင်ကယ်တစ်စီး ရောက်လာ၍ သီလရှင်မှ `ကယ်ကြပါဦး´ ဟုအော်ရာ ၎င်းလူမှ သီလရှင်၏ ဘယ်ဘက်နားထင်အား လက်ဝါးဖြင့်ရိုက်ပြီး လမ်းဘေးခြုံထဲသို့ ဆွဲခေါ်သွားကြောင်း၊ ကျန်တစ်ဦးမှ နောက်ကနေ၍ သီလရှင်အား တွန်းပေးကြောင်း၊ ခြုံထဲအရောက်တွင် သီလရှင်အား ပါးစပ်ပ်ိတ်ပြီး တွန်းလှဲပြီး အပေါ်မှခွထိုင်၍ ခလုတ်ဓါးဖြင့် လည်ပင်းအား ထောက်ပြီး`မအော်နဲ့ ငြိမ်ငြိမ်နေ အော်ရင်သတ်ပစ် မယ်´ပြောကြောင်း၊ သီလရှင်မှာကြောက်၍ ငြိမ်နေစဉ် ထိုသူက သီလရှင်အား သားမယားအဖြစ် စော်ကားကြောင်း၊ ထိုသို့စော်ကားနေစဉ် အရပ်ပုပု သွားခေါခေါလူမှ သီလရှင်၏ ၀မ်းဗိုက်သို့ ခလုတ်ဓားဖြင့်ထောက်ထား ကြောင်း၊ သီလရှင်အား အလိုမတူဘဲ သားမယားအဖြစ်စော်ကားပြီး ထိုင်နေစဉ် ရွာသားများ အသံကြား၍ `ထိုင်နေ ငုတ်တုတ်ထိုင်နေ´ ၎င်းလူနှစ်ယောက်က ပြော ကြောင်း၊ သီလရှင်မှ ကြောက်၍ ထိုင်နေစဉ် ထိုလူနှစ်ယောက်မှာ လာရာ လမ်းဘက်သို့ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်းတို့နှစ်ဦးထွက်ပြေးသွားရာ သီလရှင်မှ ကယ်တော်မှုကြပါအော်၍ ရွာသားများ ရောက်ရှိ လာကြောင်း သီလရှင်မှ မကွေးမြို့ မ ရဲ စခန်း တွင် ထွက်ဆို ခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
ထို့နောက် ၎င်းနေ့ ည(၁၁)နာရီခန့် အချိန်တွင် ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သီလ ရှင်မ…..(၃၇)နှစ်က မကွေးမြို့မရဲစခန်းတွင်(ပ)၂၄၂/၂၀၁၃ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၇၆/၅၀၆/၁၁၄ အမှုဖွင့် အရေးယူထားကြောင်း သက်ဆိုင်ရာမှ သတင်း ရရှိသည်။
12/10/2013 01:46:00 PM crime-news
ရန်ကုန်တိုင်း မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ဝေဇယန္တာလမ်းနှင့် ဂန္ဓမာလမ်းထောင့်ရှိ ဟိုဆေးကုန်တိုက်တွင် မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် လူ(၇)ဦး သေဆုံးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ သတင်း ထုတ်ပြန် ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါသည်။
အဆိုပါ မီးလောင်မှုကို ၁၀.၁၂.၂၀၁၃ရက်နေ့ ၀၀၂၅အချိန်မှာ မရမ်းကုန်းမြို့မ ရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ သူများနှင့်အတူ ဟိုဆေးကုန်တိုက်တွင် မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားနေကြောင်း သတင်းအရ သွားရောက်စစ်ဆေးရာ ၎င်းကုန်တိုက်၏ အပေါ်ဆုံးထပ်ရှိ Venus Garden Spa အလှပြင်ဆိုင်တွင် လျှပ်စစ်မီးပူအား မီးပလပ်ထိုးထားရာမှ အပူချိန်လွန်ကဲကာ မီးစတင်လောင်ကျွမ်းခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။
အဆိုပါ မီးလောင်ရာသို့ မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ မီးသတ်ယာဉ်(၂၄)စီး၊ အုပ်ချုပ်မှုယာဉ် (၆)စီးတို့ဖြင့် မီးငြိမ်းသတ်ခဲ့ပြီး မီးလောင်မှုကြောင့် ဆိုင်အတွင်းရှိ ကျား (၃)ဦး၊ မ(၂)ဦး၊ ကျား/မခွဲမရ (၂)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၇)ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး တန်ဘိုးငွေကျပ် (၅၆၇၅၀၀၀)ခန့် ဆုံးရှုံးခဲ့သောကြောင့် မီးကိုပေါ့ဆစွာသုံးစွဲသူ ထွန်းထွန်းနိုင် (ဘ)ဦဟုန်တုံငုံအပေါ် မရမ်းကုန်းမြို့မရဲစခန်း(ပ)၅၁၁/၂၀၁၃၊ ပုဒ်မ ၃၀၄-က/၂၈၅ ဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူထားရှိကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့သတင်းထုတ် ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါသည်။